Ndeupi musiyano pakati peanoraswa masks uye ekurapa masks Vagadziri uye Vanotengesa - China Factory - Quanzhou waimaoniu Export uye Export Trade Co, Ltd.
Ndeupi musiyano pakati peanoraswa masks uye masks ekurapa?
1. Zvivakwa zvakasiyana: masiki anogadzirwa anogadzirwa nezvikamu zviviri zve 28 g isina-yakarukwa machira. Masiki ekurapa anonyanya kugadzirwa neketi imwe chete kana kupfuura emachira asina kuvezwa.
2. Maitiro akasiyana: Iyo mikuru yekugadzira masiki ekurapa anosanganisira meltblown, spunbond, mhepo inopisa kana acupuncture, nezvimwewo, izvo zvinoenderana nekupikisa zvinwiwa, kusefa nhundurwa nemabhakitiriya, uye machira ekudzivirira. Disposable matatu-dura masiki akagadzirwa maviri mafaera efaibha asina machira akagadzirwa, ayo anoshandiswa zvine hungwaru kurapa pakurapa, aine rimwe dura riri mukati iro rinodzvanya kupfuura 99% yefaera bactericidal jira uye rinoputirwa neroni.
3. Mhedzisiro yacho yakasiyana: pasi pemamiriro ekuyerera kwemhepo (85 ± 2) L / min, iyo yekurapa masiki ine kusefa kwehunyanzvi hwe isingasviki 95% kune iri pakati pehupamhi hweyerodynamics (0.24 ± 0.06) Î¼m sodium chloride aerosol , inoenderana neN95 (kana FFP2) nepamusoro. Inogona kuvharidzira hutachiona hwehutachiona zvinhu <5Î¼m muhupamhi kana kusangana nepedyo nehutachiona-hutakuri hutachiona zvinhu. Disks dzinoraswa hazviite.